Fifandonana nahery vaika tao Mahabo : nirefotra ny basy sy grenady, dahalo roa matin’ny zandary | NewsMada
Fifandonana nahery vaika tao Mahabo : nirefotra ny basy sy grenady, dahalo roa matin’ny zandary
Henjana ny fifampitifirana teo amin’ny zandary sy ny dahalo tao Mahabo, distrikan’i Betroka, afakomaly. Dahalo roa lavon’ny balan’ny zandary raha olona roa avy amin’ireo mpanara-dia kosa maty voatifitry ny dahalo. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, 6 km atsimo andrefan’ny USAD (Unité Spéciale anti-dahalo) ao Mahabo. Nampandre ny zandary ao amin’ny poste avancé Mahabo ny fokonolona ao an-toerana fa misy andian-dahalo saika hanafika ka raikitra avy hatrany ny fanarahan-dia. Vokany, olona telo avy amin’ny fokonolona naratra voatifitry ny dahalo ka namoy ny ainy ny roa tamin’izy ireo.
Nanampy tosika ireo fokonolona mpanara-dia ny zandary avy amin’ny FIGN taorian’izay. Raikitra ny fifampitifirana satria nifanehatra ny zandary sy ireo dahalo. Nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny grenady ny zandary ka nifamaliana ny tifitra variraraka ka tamin’izany no nahalavo ny dahalo roa lahy. Basim-borona iray ihany koa no tratra teny am-pelatanan’ireo malaso ireo. Tsy nisy naratra ny zandary ary voaaro ireo mponina.
Fa lasan’ny dahalo miisa enina nanao fanamiana miaramila mirongo basy Kalachnikov efatra koa ny vola 14 tapitrisa Ar sy volamena 30 grama ary ranontany tapa-gony tsy mbola voasivana ary finday nandritra ny fanafihana nitranga tao amin’ny fokontany Tsiafabositra Maevatanana, ny 8 marsa 2016 lasa teo. Voadaroka ny tompon-trano, saingy tsy nisy kosa ny aina nafoy. Mitohy ny famotorana ataon’ny zandary momba ity raharaha ity.